KyiMayKaung: Minthuwun (U Wun) copied from Facebook--
Kyi May Kaung shared Thura Aung's post.
March 29 at 5:25am · Singapore ·
စာဆိုကြီး ဆရာမင်းသုဝဏ် မီးကင်းအလှည့်
Photo ; credit
Hsarhpo Knwee ဆရာကြီးကိုမကြက်တကြက်ပေါင်မုံ. လို့ ပြောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သမိုင်းမှာ အဆိုးပုံရိပ် နဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့ပေါ့
Kyi May Kaung Yes, History and Truth always wins.
Posted by Kyi May at 11:40 PM